Dahab oo qiimihiisu yahay 25 Milyan Doollar oo Soomaaliya Mareykanka ka yaalla | Aftahan News
Dahab oo qiimihiisu yahay 25 Milyan Doollar oo Soomaaliya Mareykanka ka yaalla
April 16, 2019 | Filed under: Wararka | Posted by: Aftahan News
Washington(aftahannews):- Dalka Soomaaliya burburkii ka hor wuxuu ka mid ahaa dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan caalamka, waxaa jirtay in hanti badan ay dowladdi Soomaaliya dhigatay bangiyada aduunka, inkastoo aysan jirin diiwaan sax ah oo lagu qoray goobaha ay yallaan iyo cadadka hantidaasi dhan tahay.
DAHABKA SOOMAALIYA EE DIBEDDA YAALLA
Yaxye ayaa sidoo kale sheegay in hanti badan ay siyaabo kala duwan ugu maqan tahay wadamada aduunka. ”Qareeno ayaa soo helay ilaa dhowr iyo tobban milyan, qareenadu waxay qaadanayeen boqolkiiba saddex oo ay qaateen, waxaa jiray lacago yaalay wadanka France oo ay lahayd shirkadii Somali Airline, sidoo kale lacago ayaa jira ay lahaayeen Maraakiibtii Soomaaliya, haddii ay dumeen nidaamkii waxaa loo baahan yahay qareeno soo raadiya hantidii Soomaaliya, waan hubaa in ay jiraan lacago badan oo aan la ogayn”. Ayuu raaciyay Yaxye Caamir.
Markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa awood loo waayay in la hanto hantidii qaran ee uu waddanka lahaa. Qalabka ugu muhiimsan ee faraha ka baxay waxaa ka mid ahaa diyaaraddihii Somali Airlines iyo maraakiibtii Soomaaliya.
Qaar ka mid ah diyaaradahaas ayaa la sheegay inay ku dambeeyeen dalalka Jarmalka iyo Faransiiska, halka maraakiibtiina ay qaarkood yaalleen dalka Yemen, inkastoo BBC-da aysan xaqiijinin wararkaas. Dowladihii kumeel gaarka iyo kuwa hada jira ayaa la daala dhacaya daymaha lagu leeyahay Soomaaliya, waxaana laga yabaa in daba galka hantida ka maqan Soomaaliya ay qaadato waqti badan.
Deynta ay Soomaaliya qaadatay xilligii uu dalka ka jiray xukunkii kacaanka ayaa loo adeegsaday mashaariic kala duwan oo la gudagalay wixii ka dambeeyay 1970-meeyadii. Bogga looga faalloodo xaqiiqooyinka caalamka ee Index Mundi ayaa lagu daabacay sida uu qiimaha deynta isku baddalay 40-kii sano ee aan la bixinin gudahooda.
Qiyaastii $70 milyan oo doolar ayey lacagtaas ahayd sannadkii 1970-kii halka sannadkii 2011-kiina ay mareysay $1.6 bilyan oo doolar, sida lagu qoray bogga Index Mundi. Hase ahaatee hadda waxaa deynta Soomaaliya lagu leeyahay lagu qiyaasayaa 4.6 bilyan oo doolar. Waxay dad badan dareensan yihiin in dulsaarka sannad walba fuulayay uu ka batay qiimihii asalka ahaa ee deyntaas.
Dhanka kale Caalin ayaa sheegay in cafinta deynta ay ka horreeyaan tallaabooyin laga doonayo in dowladaha ay qaadaan. “Shuruudaha ugu horreeya ee adduunyadu ay martay, tusaale ahaan waddanka Afqaanistaan, oo deynta qeyb ka mid ah laga cafiyay, waxaa ka mid ah in musuqmaasuqa la xaddido, in la helo dastuur uu waddanka leeyahay oo uu ku cadyahay hannaanka canshuuraha, iyo in waxa lagaa cafinayo ay tahay qeyb ka mid ah, qeybta kalena lagaa rabo inaad awood u yeelatid, ma jirto deyn dhammaanteed la wada cafinayo”, ayuu yidhi.